Shotfarm: tamba-jotra atiny ho an'ny vokatra ho an'ny marika sy mpanamboatra | Martech Zone
Iray amin'ireo lesona marobe nianarako fony aho tao amin'ny IRCE dia hoe, ho an'ny marika sy mpanamboatra, ny e-commerce dia tsy dia momba loatra ny fivarotana varotra an-tserasera satria momba ny fivarotana any ambanin'ny tany afaka mivarotra sy mizara ny entany ho azy ireo.
Rehefa mamorona sy mampiroborobo ny fifandraisana miavaka amin'ireo mpanjifany ny fivarotana ecommerce dia afaka mijery marika sy mpanamboatra hafa izy ireo hampitombo ny firaketana ny entana amidy amin'ny mpanjifany. Fa raha hivarotra entana bebe kokoa dia mila mahazo ny atiny mifandraika amin'ny vokatra izy ireo mba hamoahana ireo vokatra amin'ny sehatra e-varotra.
Tambajotran'ny atin'ny vokatra Shotfarm dia sehatra iombonan'ny rehetra amin'ny fizarana, fanovana, fitantanana ary fizarana ny atiny vokatra. Ny Switch Marketplace an'ny Shotfarm izay vao nivoaka dia mamela ny mpivarotra hanova ny atin'ny vokatra amin'ny endriny rehetra tsy misy hetsika fanampiny ary ny mpamokatra hifantoka amin'ny kalitaon'ny atiny fa tsy ny fizarana azy.
Ho an'ny marika sy mpanamboatra - Shotfarm ahafahanao mitahiry, mitantana ary mizara rakitra marobe an'arivony isan-karazany miaraka amina toetra tena ilaina miaraka amina mpiara-miasa anatiny sy ivelany tsy andoavam-bola. Raha ilaina izany dia safidio ny endri-javatra fanampiny toy ny tranomboky misy marika miaraka amin'ny fidirana manokana, ny fitehirizana fanampiny, ny saha misy fetra tsy voafetra ary ny fanaovana saritany toetra amam-pirahalahiana, ary ny endri-javatra DAM / MDM mandroso hafa dia mora ambaratonga avokoa.
Ho an'ny mpivarotra sy mpaninjara - ShotfarmNy Product Content Network maimaim-poana dia mametraka vavahadin'ny mpivarotra an-tapitrisany dolara eo an-tananao amin'ny alàlan'ny fanentanana ny fizotran'ny fanangonana vokatra sy kalitao avo lenta ary atiny marketing avy amin'ireo mpamatsy rehetra.
Maherin'ny 10,000 ny mpanamboatra, marika, mpivarotra ary mpaninjara mampiasa Shotfarm. Vao haingana, Shotfarm nanambara fiaraha-miasa amin'ny inRiver, fitantanana fampahalalana vaovao momba ny vokatra (PIM). Ny Shotfarm Switch dia hampifandraisina amin'ny rindrambaiko PIM an'ny inRiver hahafahana mifanakalo ny angon-drakitra misy eo amin'ny mpamokatra, fizarana ary mpivarotra ao amin'ny inRiver.
Tags: marikatambajotran'ny atiny vokatravarotraecommercepim orinasainriverIrcempanamboatratambajotra atiny vokatra mpamokatrapimtamba-jotra atiny vokatrafitantanana fampahalalana momba ny vokatraantsinjaranyshotfarmswitchfarm switch